Amisom oo walaac xoogan ka muujisay Mushaar La’aanta Ciidamada Qalabka Sida !! – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Amisom oo walaac xoogan ka muujisay Mushaar La’aanta Ciidamada Qalabka Sida !!
Amisom oo walaac xoogan ka muujisay Mushaar La’aanta Ciidamada Qalabka Sida !!
Beegsonews-Kulan kedis ahaa oo ay shalay gelinkii dambe ku yeesheen Xerada Xalane Taliyayaasha Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa walaac looga muujiyay gadoodka ciidanka xoogga dalka.
Sida MOl ay wararku ku heshay kulanka ayaa waxaa ku sugana inta badan Taliyeyaasha Ciidanka AMISOM,waxaana looga hadlaayay kasoo bixitaanka Ciidanka dowladda ee degmooyin ka mid ah maamulka Hirshabeelle.
Saraakiisha AMISOM waxaa sidoo kale la joogay xubno ka socday beesha caalamka waxaana ay si cad u sheegeen culeeyska arinkaan ka dhalan kara,iyagoo ugu baaqay farmaajo iyo kheeyre in ay dhameeystiraan xaquuqda Ciidamada.